Edolobheni Sicilia Palermo catacombs we Capuchins elise (Catacombe dei Cappuccini) - indawo yokungcwaba, lapho kukhona khona izinsalela abantu abangaphezu kuka-8,000. I engavamile kulezi catacombs ukuthi bamgqumisa, umzimba mummified futhi skeletonized umufi e ukuma ecacile, futhi ulenga, ukwakha Ukwakheka kunalokho scary. Kuyinto yamathuna elikhulu ezidunjini ezomisiwe emhlabeni.
E-Italy, i- esiqhingini saseSicily catacombs we Capuchins itholakala ngaphansi Palermo Capuchin Sezindela (Convento dei Cappuccini). Ngenxa yokuthi lolu daba Kuvezwe ekupheleni kwekhulu XVI, uye kakhulu isibalo sezikhungo izindela izimfundamakhwela ziyaye abahlala esigodlweni, cishe lapho ukungcwaba izinsalela abazalwane oshonile. Kwanqunywa ukuhlela zomngcwabo lapho Crypt ngaphansi isonto sezindela. Okokuqala kwakungekho mzalwane wangcwatshwa Silvestro ka Gubbio e 1599, futhi kamuva lapha zingcwatshwe izidumbu zabantu izindela abaningana ababefile ngaphambili. Kancane kancane egumbini Crypt yisikhala, kanye Capuchins bemba umhubhe eside, okuyinto elibamba okungcwatshwa ngayo izindela efile kuze 1871.
bona babasekeli babo esinothile acebile Isigodlo, ngokuhamba kwesikhathi, ukuveza isifiso ukuthi ngemva kokufa kwemizimba yayo babekwa Capuchin catacombs e Palermo. Ukuze anawo amaqembu wokuziphilisa engiwumbile kubikuly ezengeziwe noveranda. Zomngcwabo lapho Palermo catacombs ku XVIII-XIX eminyaka isibe ehlonishwayo. Abameleli beNdikimba imikhaya ahlukile futhi ocebile Palermo yacela imvume ukwenze ngenjongo yokungilungiselela ukungcwatshwa kuya wesigodlo we sezindela.
I last yokungcwaba
Ngo 1882, kwathiwa ngokusemthethweni sinqanyuliwe zonke amathuna catacombs we Capuchins, lapho ngalesi sikhathi bangcwatshwa mayelana 8,000 izakhamuzi Palermo, izindela nabefundisi. Ngemva kwalolo suku, catacombs zafakwa ku-izicelo zabo ezazilethwa kungemalengiso futsi ekhethekile ezimbalwa nje kwabafileyo, kuhlanganise Giovanni Paterniti futhi Rosalia Lombardo. Namuhla, kuyinto izinsalela zabo incorrupt kukhona isici sale yamathuna ovela ngaphansi komhlaba.
Izindela ekhulwini XVII, waloba ukuthi, ngenxa umkhathi ezweni lakwa-catacombs, umzimba cishe engakutholanga nokucekelwa. Kusukela ngaleso sikhathi esetshenziswa indlela ekhethekile kulungiselelwa izinsalela oshonile sibekwe catacombs we Capuchins: izinyanga eziyisishiyagalombili, base omisiwe kumagumbi ekhethekile, emakamelweni angaphansi komhlaba. Khona-ke atholakala emizimbeni mummified sihlanzwe uviniga begqoke izingubo olunikezwa izihlobo. Ngemva kwalokho mummy hung, ohlezi futhi uboniswa kumbhalo osobala kubikulah noveranda, futhi ezinye izidumbu zafakwa amabhokisi.
Phakathi nobhadane, umzimba wahlala kancane ehlukile: izidumbu bacwiliswa izixazululo arsenic noma lime bese embukisweni zemibukiso kanye amahholo.
Huge yamathuna komhlaba ukuyivumela ukuzulazula ibilokhu ihlukaniswe yaba nezigaba:
Ngezansi ungabona idayagramu catacombs. I owayemdala kunabo bonke - ephasishi izindela lapho nemingcwabo Kwakuseshwa kusuka 1599 kuya 1871. Kujwayele ivaliwe engxenyeni yomphakathi we ezidunjini ezomisiwe bangabantu 40 ehlangene nenkolo nabapristi ohlonishwayo kakhulu nezindela.
Ephaseji, amadoda ibekwe ulwazi oluyisisekelo umzimba phakathi abanikeli bona babasekeli babo we sezindela. Ezimpambanweni zomgwaqo zemibukiso abapristi namadoda kuyinto kubikula - igumbi izingane. Maphakathi lelo hholo elincane itholakala the mummy lomfana esihlalweni unyakazisa, ebambe ezandleni udadewabo omncane, futhi niches emhlabeni emizimbeni izingane nedlanzana ezimbalwa sika.
Kuze igalari abesifazane 1943 sika yavalwa amakhethini sokhuni, nayo yonke ezidunjini ezomisiwe - evikelwe ingilazi. Ngemva nokubhonywa 1943, grille namawindi kwabhujiswa izinsalela pretty okuningi njengoba yayinjalo. Namuhla iningi ezidunjini ezomisiwe ungaphakathi niches ovundlile, nemizimba eziningana kahle walondoloza ukuboniswa thwi.
Ngo parallel, a ochwepheshe igalari ephasishi amadoda, lapho isidumbu abameli kanye osolwazi Okugweda nabaculi, odokotela, kanye nezifundiswa ezempi. Omunye Palermo legend uthi catacombs we Capuchins, okungukuthi ochwepheshe ephasishi yafakwa emzimbeni umdwebi odumile Spanish Diego Velaskesa. Nokho, futhi waqinisekisa noma ancishwe esatholakele.
Ezimpambanweni zomgwaqo zemibukiso ochwepheshe kanye kwabesifazane ihholo elincane, okuyinto iyisonto emzimbeni wezintombi kwabesilisa nakwabesifazane. Cishe emizimbeni kweshumi wabeka futhi efakwe eduze esiphambanweni sokhuni, emakhanda abo njengophawu ubumsulwa virginal ethwele imiqhele metal.
Entsha ephasishi - omncane catacombs, lapho 1837 ngemva kokuvinjelwa sibekwe obala izinsalela kwabafileyo, setha amabhokisi ne oshonile. Kwamabhomu 1943 no-1996 ngonyaka umlilo, iningi amabhokisi libhujisiwe futhi asele kamuva efakwe ngasezindongeni. Ngaphezu kwalokho, kuleli hholo okusha itholakala the mummy amaqembu amaningana omndeni, lapho umzimba kayise eqoqwe, futhi unina wamadodana eziningana ubudala esanda kweva eshumini nambili.
Chapel of St Rosalia
Okhazimulisiwe Capuchin catacombs ka Rosalia Lombardo, intombazane eneminyaka engu-ubudala wabulawa i-pneumonia ngo-1920. Isidumbu sakhe itholakala maphakathi Chapel of Saint Rosalia, okuyinto kuze 1866 sanikezelwa usizi umama kaNkulunkulu, ebhokisini lokungcwaba ezenziwe ngengilazi. Isici esivelele sesimiso Rosalie nakwesikholwa ukuyibiza isimangaliso, ukuthi umzimba wakhe wahlala engenakonakala: zamehlo, izinwele, eyelashes, izicubu ezithambile ebusweni. Wakhe nokugqumisa olwenziwa Dr. Alfredo Salafi imfihlo ukuthi ososayensi American sakwazi ukuvula muva. Ngemva komngcwabo, ngokunikelwa komzimba Rosalia catacombs we Capuchins, akukho omunye wangcwatshwa.
Crescent esiphambanweni Orthodox, uphawu incazelo
Anamandla - Iyini? Ingabe udinga isibindi emphakathini wanamuhla?
I sengqondo amaJalimane: izici. isiko-German. Izimpawu abantu German
Amagama zabesilisa eziyivelakancane
Okthoba 7, ngosuku uMthethosisekelo KwabaseSoviet Kwakugxile Khona - umthetho wezwe ukuthi ayisekho
Omunye isandla ugeza incazelo kanye umsuka phraseologism
Ukubhoboza Obuseduze - intela ukubakhela?
Amavithamini "Natalben Supra": ukubuyekezwa, ukwakheka, yokusetshenziswa
Indlela ukususa Shellac, futhi kunalokho esongela impilo izinzipho
Ukuqala aquarium kusuka ekuqaleni. Ukulungiselela kanye ukwethulwa ofanele aquarium entsha: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Kungenzeka yini ukuba uthole imali-mboleko isakhamuzi abangasebenzi?
Indlu Foam amabhlogo: ukubuyekezwa abanikazi isipiliyoni ezisebenza
DAFF Hilari: Filmography, izithombe, kanye nempilo yakho
Indlela yokwenza Gazebo kusuka ibha ngezandla zakho?